Shabaab oo dagaal xoogan ku qaaday Saldhiga ciidamada Itoobiya ee Halgan | Baydhabo Online
Wararka inaga soo gaaraya Degmada Halgan oo ka tirsan Gobolka Hiiraan, ayaa sheegaya saaka aroortii dagaal aad u abaabulan in Shabaab ay ku qaadeen Saldhiga ciidamada Itoobiya ee Degmada Halgan.
Dagaalkaan oo ahaa mid aad u xoogan ayaa biloowday saaka aroortii markii dagaalyahano ka tirsan Shabaabka ay si adag u weerareen ciidamada Itoobiya Difaacooda.
Dagaalka ayaa ku biloowday qof ismiidaamiyay oo Shabaab ka tirsan oo weeraray Saldhiga ciidamada Itoobiya, kadibna waxaa xigay Dagaalyahano Shabaabka ka tirsan oo si toos ah xabada ugu bilaabay Saldhiga ciidamada Itoobiya.
Ciidamada Itoobiya iyo Shabaabka ayaa isku adeegsaday hub kala duwan, iyadoo ciidamada Itoobiya ay ridayeen Hoobiyeyaal culus oo laga maqlaayay nawaaxiga Degmada Halgan.
Al Shabaab oo aad u abaabulnaa ayaa si adag ula dagaalamay ciidamada Itoobiya ee Saldhiga ku sugnaa, waxa ayna Shabaabka isku dayayeen inay xoog ku qabsadaan Saldhiga Ciidamada Itoobiya ee Degmada Halgan.
Ilaa hada ma cadda Khasaraha ka dhashay dagaalkaasi labada dhinac ku dhexmaray Degmada Halgan, inkastoo ciidamada Itoobiya la soo warinaayo inuu soo gaaray Khasaare xoogan, maadaama dagaalka lagu gaaday.
Al Shabaab ayaa horay dagaalada noocaan oo kale ah ku weeraray Ciidamada Amisom ee Janaale, Leego iyo Deegaano kale.